सावधान ! फेसबूकमा कहिल्यै गर्नुहुँदैन यी ७ गल्ती – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/सावधान ! फेसबूकमा कहिल्यै गर्नुहुँदैन यी ७ गल्ती
हिजोआज सामाजिक सञ्जालबाट विमुख भएर बस्नै सकिँदैन । अनि फेसबूक धेरैले चलाइरहेका हुन्छन् र दिनभरी के के पोस्ट गरिरहन्छन् ।
फेसबूकमा केही पोस्ट गरेर फ्रेन्ड लिस्टमा भएका मानिसको ध्यान खिच्ने ध्येय सबैको हुन्छ । अनि लाइक र कमेन्टको अपेक्षा पनि हुन्छ । लाइक र कमेन्ट गन्दा राम्रो लाग्न सक्छ तर वास्तविकता भिन्नै हुन सक्छ ।
यहाँ हामी फेसबूकमा गर्नै नहुने गल्तीका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।
फेसबूकमा केही पोस्ट गर्नुअघि राम्ररी समीक्षा गर्नुस् र पोस्ट बटन थिच्नुअघि कतिसम्मको व्यक्तिगत सूचना दिने भनी सोच्नुस् । नजिकैका साथीभाइ, परिवार वा सहकर्मीहरूसँग बिताएका क्षणको फोटो वा कुरा पोस्ट गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।
रक्सी पिएर गाडी नचलाउन भनिएझैं फेसबूक चलाउँदा पनि रक्सी पिउनु हुँदैन । नशाको सुरमा जथाभावी कुरा पोस्ट हुन सक्छ । रक्सी पिएको बेलामा फेसबूक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नमिल्ने यापहरू पनि बनेका छन् ।
तपाईंको फ्रेन्ड लिस्टमा ६०० मानिस छन् भन्दैमा तपाईंका ६०० साथी छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन । त्यसैले नचिनेका जो पायो त्यहीलाई साथी नबनाउनुस् । तपाईंले व्यक्तिगत कुरा शेयर गर्ने प्ल्याटफर्म भएकाले कुनै ऐरेगैरेलाई त्यसको पहुँच दिनु ठीक छैन ।
तपाईंको घरको ठेगाना, अफिसमा बिताउने समय लगायतका कुरा फेसबूकमा पोस्ट नगर्नुहोला । तपाईंमाथि निगरानी गर्नेका लागि त्यो गजबको खजाना हो ।
सन्तानका फोटा शेयर गर्ने
आफ्ना सन्तानको तस्वीर सकेसम्म कमै शेयर गरेको राम्रो हुन्छ परिवारको फोटो राख्दा विस्तृत विवरण दिनुपर्दैन । बच्चाले के खान मन पराउँछन्, उनीहरूको विद्यालयको सूचना लगायतका कुरा कहिल्यै पोस्ट नगर्नुस् ।
तपाईंले नयाँ कार किन्नुभयो, लटरी जित्नुभयो वा हालसालै ठूलो लगानी गर्नुभयो भने त्यसलाई फेसबूकमा हल्ला गर्नुपर्दैन । पैसाका कुरा प्राइभेट नै राखेको राम्रो । त्यस्ता कुरा पोस्ट गर्दा हुने दुष्परिणाम भयानक हुन्छन् ।
कसैलाई पनि फेसूबकमा गाली गर्ने वा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने काम नगर्नुस् । तपाईंका गालीलाई स्क्रीनशट गरेर कसैले पछि तपाईंविरुद्ध त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छ ।